Tiruun Bubbulte Lafee Taati (Ibsa ABO – Sadaasa 14 2019) – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTiruun Bubbulte Lafee Taati (Ibsa ABO – Sadaasa 14 2019)
Sadaasa 09 bara 2019 irraa eegalee haleellaan Sabummaa irratti kan hundaawe fakkaatu barattoota Oromoo Universitiilee Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraatti argaman keessa jiran irratti gaggeeffamaa jiru ammas hin dhaabbanne. Sadaasa 09, 2019 University Waldiyaatti lubbuun barattoota Oromoo 2 galaafatamee hedduun kan itti madaawan haleellaan jibbiinsa Sabummaa irratti kan hundaawe fakkaatu kun yeroo ammaa gara Universitiilee Gondar, Dasee fi Dabrabrihaanittis babal’atee miidhaa bifa gara garaa hedduu barattoota Oromoo irraan gahuu itti fufee jira. Odeeffannoo hanga ammaatti qabnuun guyyaa kaleessaa (Sadaasa 13, 2019) University Gondaritti barattootni Oromoo 2 akka hamaatti kan madaawan oggaa tahu University Daseettis akkasuma barattootni muraasni madaa ulfaataa hanga lubbuutti sodaachisu madaawuun beekamee jira.
Dhimmi miidhaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barattoota Oromoo irra gahaa jiruu kun Oromoo qofa osoo hin taane Ummatoota biyya kanaa hundumaa yaaddoo guddaa keessa kan galchaa jiru dha. Gochaan fokkataan kun hatattamaan kan hin dhaabsifamne yoo tahe achi irraa babal’atee biyya kana balaa fi gaaga’ama guddaaf afeeruu danda’a. Gama kaaniin Mootummaa Naannoo Oromiyaas tahe Mootummaan Federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo gahaa kennanii miidhaa kana battalatti dhaabsisuuf tarkaanfiin quubsaan hanga ammaatti fudhatan mul’achuu dhabuun isaa hedduu nu gaddisiisa.
Mootummaan Naannoo Amaaraa miidhaa qaanfachiisaa bulchiinsa isaa jalatti barattoota Oromoo irra gahaa jiru kana hatattamaan dhaabsisuu hanqachuu qofa osoo hin taane sadarkaa miseensota hooggana isaa ol’aanootti haala itti gaafatamummaan itti hin dhagahamneen miidiyaa marsaalee hawaawummaa (Social media) irratti bahanii wanti barreessaa turan gocha kana keessaa akka harka qabanitti kan shakkii namatti bulchu ture.
Maatiin barattootaa ilmaan isaanii manneen barnoota ol’aanoo (Universitiilee) naannoo adda addaatti oggaa ergan wabii nageenya ijoollee isaanii Mootummaa irratti dhiifachuudhaani. Mootummaan Federaalaas tahe kan Naannoolee hundaa kana hubatanii nageenya barattootaa eeguuf dirqama akka mootummaatti qaban akka bahatan jabeessinee gaafanna. Kun tahuu baannaan dhibdeen kun babal’atee fi bifa jijjiirratee Ummatoota walitti buusuudhaan balaa nageenya biyyaa akka hin taane nu yaaddessa.
Maayyii irratti lubbuu barattootaa haala kana keessatti bifa nama gaddisiisuun dabre hundaaf gadda nutti dhagahame irra deebinee ibsachaa, miidhaa ilmaan keenya irra gahaa jiru kana dhaabsisuufis tahe balaa sana irra ulfaataa kanaan wal qabatee dhufuu malu oolchuuf kanneen dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii akka bahatan cimsinee gaafanna.
OBN Sad. 04,2012- OBN Hayyuu Saayinsi Hawaasaa Piroofessar Ku’ee Kumsaa waliin turti taasiste jirti! Galgala har’aa Sa’ati 3:00 irratti dhihaata!Hordoofaa!!
OBN Sad. 04,2012- Pirezidaanti Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haala yeroo irratti OBN waliin turti taasisaniru.
Yaadni Ijoo isaanis:
-Sirni warraaqsa dimookraasi uummata Oromoof fide bu’aa dhaa moo miidhaa isaatuu caalaa?
– Walitti baquu/makamuu miseensoota Paartii ADWUI fi deeggartootaa bu’aa fi faayidaa uummata Oromoo fi biyyattif qabu maali?
– Falaasamni Ida’amuu akkamitti ilaalamaa jira? fi kanneen birooratti OBN Pireezidanti Shimallis waliin turti tsaasise jira.
Boru Galgala sa’a 2:00 irratti dhihaataa! Nu eegadhaa!!
Gowwa akka keeti kanatu nafxanya nuficissisa jira namuma argeetu funyan qabe olif gad ofaa gowwa akkaketi kana doofa!
Obbo Shimalliis amma ati dhugaa motummaa nannoo oromiyaati? Ijoollee oromoo nannoo amaraati dhumaa jirritu maalif garaa oromiyaati hin debiiftu?? Mo Angoo isaa hin qabadu!!!!
OBN Sad. 4,2012- Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad Paartileen Siyaasaa naannolee hojii siyaasaa isaanii hojjetan keessatti karaa nagaa fi tasgabbii qabuun ta’uu akka qabu hubachiisan.
Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad har’a waajjira isaanitti hooggantoota Paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa waliin mari’atan.
Rakkoo nageenyaa muudataa jiru kanaanis lubbuun lammiilee darbaa kan jiruu fi qabeenyi hedduunis barbada’aa jiraachuun isaa yaaddeessaa ta’aa dhufeera.
Walgahiin kunis naannolee lamaanitti rakkoon nageenyaa cimaa dhufuu isaa sababeeffachuuni jedhame.
Mariin kunis Paartileen morkattootaa nageenya buusuu fi hiree fuula duraa biyyattii irratti marii mari’atamuuf jalqabbiidha jedhame. Maddi:- Waajjira ministeera muummee.
ጠ/ሚር ዐቢይ አሕመድ የዉይይቱ መክፋቻ ላይ ያደረጉት ንግግር:
ጠ/ሚር ዐቢይ አሕመድ በኦሮሚያና በአማራ ክልል መሠረታቸውን ካደረጉ ተፎካካሪ ፖርቲዎች ጋር ያካሄዱት ስብሰባ መክፈቻ ንግግር